Dawladda Soomaaliya Oo Ka Fiirsanaysa Wafdigii Shalay Loo Diiday Galitaanka Kismaayo - iftineducation.com
iftineducation.com –Iyadoo maalinimadii Shalay Magaalada Kismaayo ay gaareen Wafddi Xaqiiqo Raadis ah oo ka socday Amisom iyo Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya Khilaafan ba’an oo xiligan u dhaxeeya Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Jabhadda raas Kaanbooni.
Wafdigan oo Barqanimadii Shalay ka dhoofay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Muqdisho ayaa gaaray Garoonka Diyaaradaha Magaalada Kismaayo halkaasoo ay kaga hor yimaadeen Saraakiisha Ciidamada Amisom Kiinya oo halkaa ku sugan.
Wafdiga ayaa loo sheegay in Maamulka Gobolku uusan ku soo war gelin imaatinkooda isla markaana aanay u fasaxeyn wafdigan in ay gudaha u galaan Magaalada Kismaayo.
Saraakiisha Kiinyaanka oo ku sugan Garoonka Diyaaradaha Kismaayo ayaa wafdiga u sheegay inaysan ammaankooda xiligan dammaanad qaadi Karin isla markaana aysan u fasaxayn in ay hore u galaan Magaalada Kismaayo.
Wafdiga ayaa Ujeedka socodkoodu waxaa uu ahaa in ay soo indha indheeyan una kuur galaan Dhuxusha la sheegay in iminka laga rarayo Magaalada Kismaayo taasoo xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay ghore amar uga soo saartay kaasoo ahaa inaan dhuxushaas la dhoofin Karin iyadoo la ilaalinayo ga’aankii Golaha ammaanka ee qaramada Midoobay.
Maamulka Shiikh Axmed Madoobe oo ah Guddoomiyaha sida ku meel gaarka ah uga arrimiya Magaalada Kismaayo ayaa arrintaa jabiyay kaasoo amray in Dhuxusha la dhoofiyo iyadoo maalmihii la soo dhaafayna ay hala ka socotay Hawlo dhuxushaas lagu daabulayo.
Dod dheer kaddib ayaa wafdigii ka socday xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaa lagu qanciyay in ay dib ugu laabtaan Magaalada Muqdisho oo markii hore ay ka soo kicitimeen.
Wafdigan ayaa hadal la’aan dib ugu soo laabtay isla shalay gelinkii danbe Magaalada Muqdisho kuwaas oo markiiba abbaaray xarunta Madaxtooyada Magaalada Muqdisho si ay ula socodsiiyaan waxa dhacay Madaxweynaha dawladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa iminka ka fiirsanaya tallaabadii xukuumaddiisu ka qaadi lahayd jabinta lagu sameeyay Go’aankii Golaha Ammaanka ee qaramada Midoobay iyo amarkii Xukuumaddu ka soo saartay Dhuxushaas .
Si kastaba arrintan ayaa u muuqanaysa Khilaaf oo xooggan oo soo kala dhex galay Maamulka Raas Kaanbooni iyo Dawladda Federaalka Soomaaliya xilli haatan la damacsanaa in Maamul rasmi ah loo sameeyo Gobolka Jubada Hoose.